1 TANTARA 13. 1-14 F.2,5 | Fitandremana Ankadifotsy
1 TANTARA 13. 1-14 F.2,5
MANANA NY FIANDRIANANY NY TOMPO
Manontania ny hevitry ny Tompo. Tsara ny fikasan’i Davida mpanjaka hanao ho laharam-pahamehana ny famerenana ny fiaran’ny fanekena ho any Jerosalema. Toa midika izany fa Andriamanitra Tompo no ivon’ny fiainany sy ny vahoakan’ny Isiraely. Nanontany ny hevitry ny mpifehy i Davida fa tsy nanontany izay hevitry ny Tompo. Ny vahoaka moa tena feno fankatoavana dia nihaino tsara ny toromarika. Mba naka izay toromarika tamin’Andriamanitra ve i Davida ny amin’ny fomba hamerenana io Fiaran’ny fanekena io ?
Voafetra hatrany isika, mety manadino ny sitrapon’ny Tompo ka manjary miteraka loza sy tsy fanajana ny fitsipiky ny Tompo. Aza mialoha lalana ny Tompo mihitsy amin’ny lafim-piainana rehetra fa mifankazara amin’ny Tsitoha hahafantaranao izay tokony hatao.
Masina Jehovah Andriamanitsika. Efa voalaza tao amin’ny bokin’ny lalàna fa andraikitry ny Kehatita ny milanja ny fiaran’ny fanekena saingy tsy amin’ny tanany (Nomery 3.30-31 ; 4.15 ; 7.9) fa misy barany efa natokana ho an’ízany (Eksodosy 25.12-15). Mila tandrovana ireo fitsipika efa napetraka (Nomery 4.1-49; Deoteronomia 10.8; 18.5) satria niteraka loza, fahatezerana, tahotra… Amin’izay rehetra atao dia aza mialoha lalana ny Tompo, na koa hoe miankina amin’ny hafanam-po sy ny saina.
Mandray fitahiana izay mampiantrano an’i Jehovah. Nanaiky izay baikon’ny mpanjaka ilay levita Obeda -Edoma hany ka nandray ny famangian’Andriamanitra. Fifaliana, fahasoavana, fitahiana no noraisin’izy mianankavy.
Hosaintsainina : Te hitoetra ao amin’ny fiainanao ny Tompo ahafahany manasoa sy manome fiadanana ho anao.